NetworkManager: Manage ako maratidziro muDebian | Kubva kuLinux
Nezuro ndakafunga kudzorerazve Debian paPC inoshanda, mune iyi nyaya, Kuedzwa kweDebian zvagara zvagara zviri tsika yangu. Sei ndatora danho iri? zvakanaka nekuda kwe Systemd, iyo mukuda kwayo kudzora zvese izvozvi inodawo kubata cron, uye nekudaro, iyo KDE Task Kuronga haichashandi nekuti inoshandisa crontab uye kwete iyo Daemon's Systemd.
Mushure mekureba kwenguva refu muchishandisa archlinuxPane zvinhu zvandanga ndichisiya kumashure uyezve, ndanga ndazvikanganwa. Muenzaniso weizvi ndizvo zvandinoda kutaura nezvazvo muchinyorwa chino.
Mushure mekuita kumisikidzwa neNetinstall ISO, uye mushure mekupedza ingangoita maminetsi makumi maviri ndakamirira (nekuti APT ichiri kunonoka, asi ichinonoka) kune ese KDE, mafomu angu uye mamwe kuti aiswe, ndakafunga kupinda muchikamu changu uye kunyangwe hazvo ini yanga iine kubatana, uye ese mapakeji anodiwa akaiswa, yanga isiri kuibata NetworkManager.
Avo vanoshandisa Debian vanofanira kuziva chikonzero zuva nezuva. Kune avo vasingashandise Debian uye vanoda kuyedza iyi distro, izvo zvandichataura pazasi zvinofanirwa kutarisirwa, kuti varege kupenga.
Dambudziko nderekuti kukwanisa kuita kumisikidza kuburikidza neNETWORK, Debian inogadzirisa data rayo kuburikidza nefaira / etc / network / interfaces, iyo inofanirwa kuve nechakadai mukati.
# Iyi faira inotsanangura maratidziro enetiweki anowanikwa pane yako system # uye maitiro ekuvagonesa. Kuti uwane rumwe ruzivo, tarisa nzvimbo (5). # Iyo loopback network interface auto lo iface lo inet loopback # Iyo yekutanga network interface inobvumira-hotplug eth0 iface eth0 inet dhcp
Mune ino kesi, mitsara miviri yekupedzisira inotsanangura kuti kubatana kwakasimbiswa (kana kwakagadzwa) neDHCP, uye mhinduro yacho yaizove yekungotaura pamusoro pemitsetse miviri yekupedzisira, ichisiya iyo faira nenzira iyi:
# Iyi faira inotsanangura maratidziro enetiweki anowanikwa pane yako system # uye maitiro ekuvagonesa. Kuti uwane rumwe ruzivo, tarisa maficha (5). # Iyo loopback network interface auto lo iface lo inet loopback # Iyo yekutanga network interface # tendera-hotplug eth0 # iface eth0 inet dhcp
Asi usati watangazve, isu tinofanirwa zvakare kuve nechokwadi chekuti iyo faira /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf zvinotaridzika seizvi:
[main] plugins = ifupdown, keyfile [ifupdown] yakagadzirirwa = ichokwadi
Uye neizvi isu tinofanirwa kukwanisa kubata edu network tichishandisa NetworkManager.
Uye ndizvozvo 😉
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Dzidziso / Mabhuku / Matipi » NetworkManager: Manage ako maratidziro muDebian
Ndatenda ne "tip", ndinoshamisika kuti ndeipi KDE vhezheni iri iyo inowoneka mumufananidzo sezvo ini ndisati ndamboona ruzivo rweiyo internet kumhanya uye ndeipi theme yandinoshandisa yandaifarira zvakanyanya
Pindura kuna Euphoria
Ndiyo Applet inobuda mu KDE 4.13 uye yepamusoro. Dingindira randiri kushandisa kutevedzera KDE 5. Kwaziso
Chinondishamisa ndechekuti iyo KDE 5 theme mimics KDE 4.13.
Uri kudzokera kuDebian here kana kuti chingori chiitiko chinopfuura? Ndinovimba inouya kutanga uye ndinogona kugara ndichitora mukana kune aya manomano,
zano rakanaka kudzamara ndadzokera ku debian 🙂
izvozvi handina matambudziko ne ubuntu / mint 14.04 uye madhiraivha akatengeswa amd / ati
Neraki ndine chishamiso chekuve nePC neIntel chipset.
Uye ndeapi mabhenefiti ayo NetworkManager ane pamusoro pe wicd ..?
NetworkManager ine zvirinani kusangana pamwe zvese zviri zviviri Gnome uye KDE (kutaura maererano nemaapplet), kunze kwekuti nm inokutendera iwe kubata proxies, vpn, usb modems, ppp, zvinhu izvo wicd isingatenderi iwe kuti ubate mune imwechete software unit .
Zvakadaro, ini ndinoda wicd kubata yakapusa network ingave wired kana WiFi, kana uchishandisa nharaunda senge XFCE kana WMs.
Zvimwe chete. Zvakare, ini ndajaira zvakawanda kuNetworkManager pane kuWicd.
Ini ndinowanzo shandisa wicd sezvo iine ncurses mutengi, iyo ine NetworkManager, isina graphical nharaunda iri nyonganiso yekubatanidza kune wifi network
@ arkhan NetworkManager zvakare ine interface yayo mune ncurses uye chirongwa chiri kubvunzwa chinonzi nmtui, uye zviri nyore kushandisa, pamwe nekuve nekutsamira kushoma pane wicd-kutuka.
Kwakanaka, kubvira zuva rakapfuura ini ndagamuchira yekuvandudza paDebian Jessie mandiri iyo iyo iyo SysVinit kumashure paPC yangu, iyo iine XFCE nekukasira.
Ngatione, kana iyi nyowani yekutsvagurudza ichindiponesa iyo nguva yekumisikidza iyo NetworkManager neruoko, sezvo yapfuura gadziriso yakaigadzirisa iyo mukugadzirisa nzvimbo yeSystemD neSysVinit.
Haasi Debian Jessie anofanirwa kunge atove neSystemd? Kana "kugamuchirwa" hakusati kwapera?
Systemd iri kushanda pana debian, asi kune kumwe kuenderana kunoenderana ... Unogona kudaidza yekare mirairo "sevhisi samba mira" ... ivo havasi se "verbose" sepakutanga, asi ivo vanoita.
David Villa akadaro
& dai iwe zvirinani wadzikisa iyo ISO; kuipfuudza kune USB uye nekuiisa yakananga?
Ini ndinoti ndiri hafu-ndapererwa & mitambo yekumisikidza inonditenderedza kupenga, ini ndinofarira kupisa ISO yangu paDVD & kuitora ndisati ndaita network yekuisa.
Pindura David Villa
Iko hakuna chikonzero mu "kupisa" DVD bvunzo, ivo vanoita gadziridzo hombe vhiki rega rega, uye semuenzaniso kutanga kwegore ISO (sysvinit) ingakonzere matambudziko kana uchigadzirisa nhasi ne systemd. Pasina kutaura KDE kuti chete mashoma mashoma apfuura vaive neKDE 4.10 uye nhasi 4.14.
Ndanga ndiri mushandisi weDebian kwemwedzi isere. Nemhedzisiro iyi irikumuka yakatenderedza systemd ini ndanga ndafunga nezvekudzokera ku sysvinit, zvirinani kudzamara mvura dzikama woona mashandisiro ehurongwa. Ini ndaifunga kuti kuva ne xfce yakaiswa sedesktop nharaunda hakuzove nematambudziko, asi ese ma network-maneja uye lightdm gadza systemd kwandiri (Ini ndinogadzirisa iyo yekupedzisira nekuisa slim) Mubvunzo wangu ndewkuti kana paine chero network maneja isinga tsamira pane systemd. Ini ndatsvaga NetworkManager mune apt-cache uye haina kwayainosvika.
Nenzira, panguva ino ndinoita zvese izvi bvunzo mumushini chaiwo. Ikoko handina matambudziko kana network-maneja ikatsakatika, asi dai ndakazviita muhurongwa hukuru ndingadai ndakasiiwa ndisina network (zvirinani kuti zvakaitika kwandiri mukutanga bvunzo dzekuchinja kwandaita). Saka ini ndoda kutora zvese zvakasungirirwa ndisati ndasangana neyangu yemazuva-zuva-system.
Izvo zvinodikanwa here kuwedzera mushandisi kuboka re netdev? Ndakazviita uye handina matambudziko
Alexander alex akadaro
Ini ndiri mushandisi mutsva mu linux, mumwe munhu anganditsanangurira nhanho nhanho zvandinofanira kuita? Nezuro ndakaisa wifislax, asi ikozvino NetworkManager haitangi, handisi kana kugona kubatanidza nethernet tambo. Ndingade kuvanzwisisa asi handisi kunzwisisa zvavari kutaura nezvazvo
Pindura kuna AlejandroAlex
chii chinonzi mapakeji anonzi kubata bondig timu vpn, vamwe vari ne gnome graphical network maneja
Isa Android_X86 pamwe chete nezvimwe zvinogoverwa zveGNU / Linux